Dowlada Soomaaliya oo hubkii ugu horeeyay helaysa iyo Xasan Sh Maxamuud oo walwalsan |
Dowlada Soomaaliya oo hubkii ugu horeeyay helaysa iyo Xasan Sh Maxamuud oo walwalsan
adaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xassan Sheikh Max’ud ayaa shaaca ka qaaday in ay dowladiisa rajeyneyso in ay hesho hubkii ugu horeeyey kaddib markii uu dhawaan Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ka qaaday cunaqabateyntii hubka ee dalka saarneyd.
Wareysi lala yeeshay Madaxweyne Xassan Sheikh Max’ud ayuu ku sheegay in mudo labo bilood ah gudahooda ay filayaan in uu Soomaaliya hub soo gaaro si loo xoojiyo dagaalka ay dowladdu kula jirto Al-Shabaab.
Madaxweynaha ayaa xusay in uu ogyahay walaaca uu caalamku ka qabo in hub la siiyo dal dhibaato kusoo jiray muddo dheer iyo in ay dunida daawaneyso sida ay dowladiisa u maareyneyso hubka.
“Waxaan qaadnay mas’uuliyad buuxda, adduunyadu way ina daawaneysaa, wayna na dabagaleysaa” ayuu yiri madaxweynaha oo dhawaan ka qeybgalay shirkii Jaamacadda Carabta ee magaalada Dooxa.
“Kama walwalsanin helitaanka hubka, waxaan ka walaacsannahay sida loo maareyn karo’’ ayuu Madaxweynuhu hadalkiisa sii raaciyey.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa wax micno badan sameynaya ku tilmaamay qaraarkii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay horaantii bishani ka soo baxay ee Soomaaliya ugu oggolaanayey in ay soo iibsan karto hubka yar yar.
Xassan Sheikh Max’ud ayaa dhanka kale sheegay in ay dowladiisu u baahan tahay lacag gaareysa 450 milyan oo doollar taasi oo lagu maalgeliyo mashaariic yar yar oo lagu horumarinayo 72 degmo oo dalka oo dhan ah, si ay gacan uga geysato soo kabashada dhaqaalaha iyo in uu dalku ka gudbo ku tiirsanaanta gargaarka bani’aadannimada.